I-Chemistry ye-Soda ne-Tooth Decay
Uvile i-soda imbi kumazinyo akho, kodwa yinyaniso? Ukuba kunjalo, kutheni kubi?
Impendulo: Ewe, i-soda yonakalisa amazinyo akho. Ukusela isiphuzo se-carbonated ngokwenene kuyona yezinto ezimbi kakhulu ongayenza kwimpilo yakho yamazinyo. Isizathu kukuba i-carbonation eyenza i-soda bubbly iyenza ibe yomelele kakhulu. Ininzi ye-sodas iqukethe i-citric acid, eyenza isiselo sinambitheka, kodwa siyonakalisa amazinyo.
I-punch enye kunye nama-sodas amnandi, kuba i-pH ephantsi ihlasela i-eam enyosi, ngelixa i-ushukela idla iibhaktheriya ezibangela ukubola. Awususeli ukutya kokutya okunxila, kuba i-asidi kwi-soda ephazamisa amazinyo.
Indlela Yokunciphisa Ukulimala Kwamathambo Okuvela kwiSoda
Indlela eyona ndlela yokunciphisa umonakalo kumazinyo akho kwi-soda kukugwema ukusela. Ukuba awukwazi ukuwunika, zama ukunciphisa ukuba usela kaninzi kangakanani kwaye ulandele ezi ngcebiso:
Gwema i-colas kunye ne-soda rhoqo ye-orange. Ngokuqhelekileyo, ukutya, okanye i-cola ekhethiweyo yiyona nto iyenzayo. Omnye onomxholo ophezulu weshukela i-soda rhoqo ye-orange. Cinga ukuvavanya i-soda enothambileyo ukubona indlela ineshukela equlethe ngayo . Iziphumo zinokumangalisa! Iziphuzo ezingekhoyo ii-colas zisasaza amazinyo akho ngenxa yokuba zinamazinga aphezulu e-citric acid. I-pH yezi ziselo ziphezulu, kodwa i-citric acid ibophelela kwi-calcium kwaye ilahle i-koqweqwe.
I-Sip soda nge-straw. Ukusela ngotshani kunciphisa umnxibelelwano phakathi kwamazinyo kunye nesiselo esiyi-acidic.
Ukuba kufuneka uphuze i-soda, zama ukufumana ukutya kunokuzimela. Ukutya kunceda ukulawula i-pH ngaphakathi emlonyeni wakho, ukunciphisa ukuhlasela kwe-asidi kumazinyo.
Gcoba umlomo wakho ngamanzi emva kokusela isoda. Oku kuya kunceda ukuphazamisa i-pH nokunciphisa izinga leswekile. Ngenye indlela, yidla ukutya kokuloba. Iimveliso zobisi zikunceda ukukhumbuza ii-eam ezinyo. Unokuphinda uhlakulele kwimifuno enomdaka okanye i-xylitol ene-gum. Oku kunceda amazinyo ahlambulukileyo.
Musa ukuxubha amazinyo emva kokusela isoda. Kuvakala ngathi kuya kuba yinto efanelekileyo, kodwa ngokwenene yenza imeko embi ibe yimbi ngakumbi kuba isenzo somatshini sebhola lezinyosi senza i-eamel ebuthathaka. Vumela ubuncinane isiqingatha seyure emva kokusela i-soda (okanye nidle nantoni na eyenziwayo, njenge-citrus okanye i-candy emuncu) ngaphambi kokuba uthathe i-toothbrush.
Sitshintshela kwibhiya yengcambu. Inyosi yangempela yenkomo iqukethe i-carbonation yendalo, ngoko ayiqukethe amanqanaba afanayo e-phosphoric acid okanye i-citric acid.
Unokuvavanya indlela i-soda embi ngayo amazinyo akho. Ukuba unako ukubamba amazinyo (akudingeki ukuba ube ngamazinyo abantu), gcoba kwi-soda uze ubukele indlela ekukhawuleza ngayo. Inketho elula kukukhupha amathambo enkukhu. Amagqabi awawunzima kakhulu njengamazinyo, kodwa afana neekhemikhali. I-asidi ibetha i-calcium kumazinyo namathambo. Amathambo ashiywe i-rubbery kuba aqukethe i-collagen eninzi. Amathumbu aphelisa ngokugqibeleleyo.
I-Cyanide Inetyhefu kwiAples, i-Peaches, Cherries, Plums, njl.
Igalari yezithombe zeMaminera kunye neComposition Composition
Iifomthi Zomileyo kwiNgcaciso yakho yeMoto
I-Carnivorous Dinosaur Imifanekiso kunye neeprofayili
I-Apatosaurus Yafunyanwa Njani?
Indlela yokubhala iSikhumbuzo seNyukliya yeAtom
Iimpawu ezi-10 eziqhelekileyo ze-Kids for Schools
I-Branched Chain Alkane Inkcazo
UBill Clinton Iikhathuni
Ubaluleka boKhaya lweKhaya laseKhaya (FHE)
Yintoni Inkcazo yokufuduka kwamanye amazwe?